Nkà nke ndị ahịa ịda n'ịhụnanya | Martech Zone
Nyaahụ, n'ụzọ ọrụ, anọ m na-ege ntị Dave Ramsey gwa Joe Beam, onye edemede nke Nkà nke ingda Lovehụnanya. Joe kwuru na e nwere isi ihe atọ dị mkpa ị ga-ahụ n'anya… ntinye onwe, mmekọrịta chiri anya na agụụ. Mkparịta ụka ahụ rapaara m n'ahụ - nke mere na m mere ka m nwee ncheta olu banyere ihe m nụrụ ide na post.
Anọ m na-ekwurịta ya na Troy Burk, onye nchoputa na onye isi nke Right On Interactive. Troy nwere obi uto banyere ya akụrụngwa ahịa mana ekwenyeghi na otutu ulo oru ndi na-eme ka usoro ochichi nke ndu ha di ka ngwa ahia. O kwenyere na nurturing na nkwukọrịta okwu nke kwesịrị ime bụ na gị ugbu a ahịa karịa na-eduga na-adịghị enyefe gị ika. Chaị.
Nkwa, Mmekọrịta na Mmasị
nkwa - ndị ahịa na-etinye ego na ụlọ ọrụ gị maka ngwaahịa na ọrụ gị. Ọ na-eju m anya oge niile ọtụtụ ụlọ ọrụ na-etinye aka na ego ndị ahịa ha na-eweta ha karịa ndị ahịa n'onwe ha. Ọ bụrụ na ị napụta kwa nkwekọrịta ahụ mana onye ahịa gị enweghị ihe ịga nke ọma, gị abụọ efunahụ. Ikwesiri itinye aka na ihe ịga nke ọma nke ndị ahịa anyị, n'agbanyeghị ego ndị dị mkpa. Ndị ahịa gị kwesịrị itinye aka na ihe ịga nke ọma gị, na-eme ka ego ghara ịbata. Anyị na-agọzi na ndị ahịa ndị na-agba mbọ ka anyị na Anglịkan.
Mmekọahụ - emehiela mmekọrịta chiri anya maka mmetụta onwe onye. Mmekọrịta na-ewepụtakwa oge iji ghọta ndị ahịa gị yana ka ha ghọta gị. Anyị na-ekerịta adịghị ike anyị na ndị ahịa anyị, mụta ihe adịghị ike ha, ma hụ na anyị na-eme atụmatụ iji hụ na anyị ekpuchila. Anyị na-amụtakwa ihe anyị nwere ike ime gbasara ndị ahịa anyị ma soro ha kerịta ihe karịrị nkwekọrịta anyị. Anyị na-ewebata ha na njikọ anyị, anyị na-ahụta ha ihe ndị ọzọ, anyị na-akwado ha na ntanetị. Anyị anaghị abanye na nkwekọrịta ụlọ ọrụ ọ gwụla ma anyị na-eji ngwaahịa ha ebe enwere ike. Anyị na-anwa ịmara ha nke ọma na anyị nwere ike ire ngwaahịa ha nke ọma.
ahuhu - otu n’ime ụlọ ọrụ ndị anyị kwurịtara okwu na ịgaghị enwe nsogbu. Ka anyị na-anwa ịchọpụta otu anyị nwere ike isi nyere ha aka (ha abụghị ndị ahịa), ị nweghị ike ịchọta otu onye ha na mkpara na omiiko banyere ihe ha n’eme. Ha na e goro ndi ozo ndi amara aha ha ebe a ka ha sonyere ha maka webinars na ihe ndi ozo… mana ndi nkwuchita ndia adighi eji ya. na ngwaahịa. Kedu ka ha ga - esi nwee mmụọ ma ọ bụrụ na ha etinyeghị aka n'iji ngwaahịa a? Isi okwu bụ na ha enweghị ike. Ọ bụ ya mere ha ji agba mgba.
Kwenyesiri ike na ndị ahịa gị? Yoù na-eso ha, ọrụ ha, ọnọdụ ha, na ihe ịma aka ha? You nwere mmasị na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ha? Ọ bụrụ na ị zara ee n’otu n’ime ajụjụ ndị a, atụla anya inwe ịhụnanya n’ebe ibe gị nọ. Anyị hụrụ ndị ahịa anyị n'anya ma nwee obi ụtọ ịsị na ndị ahịa anyị hụrụ anyị n'anya. Ọ bụghị mgbe ahụ ka ọ dị otu a, mana mmekọrịta anyị na ha na-aga n'ihu.
Ikpeazụ… ebe anyị na-eme ihe anyị hụrụ n’anya, ọ naghị arụ ọrụ ma ọlị. Nke ahụ bụ ebe dị ịtụnanya ịnọ!
Tags: ịhụnanya ndị ahịankwaịhụnanya ndị ahịammekọrịta chiri anyaahuhu